Tsara ny mampifandanja ny Self Scooter Amin'ny APP - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Tsara ny mampifandanja ny Self Scooter Amin'ny APP
Maro ireo unlicensed hoverboards avy teo hita eny an-tsena, ary tianao ny mba hahazoana antoka anao dia tsy ny iray izay azo antoka ny mitaingina ho anao, na ny ankizy. Ireo hoverboards dia azo avy amin'ny orinasa samihafa tanteraka amin'ny endrika samy hafa sy ny habeny, mba hitsena ny olona takina. Ny mpandahateny ao anatin'ny hoverboard segway dia encased ao amin'ny karbonina fible nanarona ivelany. Get ny takiana hoverboard tena mahay mampifandanja herinaratra môtô any am-baravarana ny baiko avy amin'ny lehibe safidy, Koowheel E1 dia lehibe noho ny herinaratra scooter nentim-paharazana.
Voalohany indrindra, dia zava-baovao patanty lamaody mangatsiatsiaka Design by Koowheel.
Faharoa, dia manana Free APP mba hanoratra sy hizara ny diany rehetra, hanova toe-javatra.
Fahatelo, LED miseho lamba mampiseho tanteraka ny bateria sy ny hafainganam-pandeha. Rehetra ireo endri-javatra tsara ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ity angamba no vokatra lehibe indrindra hoverboards izay nahita aho hatramin'izay, ary tonga amin'ny lafin-javatra mahatalanjona mahatonga azy ho sahaza ny tanjona. Avy eo, dia efa nandinika ny hoverboards mba hanolotra ny fanapahan-kevitra mahomby indrindra.
Indrindra Mini Segway hoverboards manana hafainganam-pandeha isan-karazany sy ny lanjany. Raha niresaka momba ny haingana sy miovaova ny hoverboard, ity iray ity manolotra Max hafainganam-pandehan'ny 22km / h. Mety angamba nampiditra 80-100kg lanjany eo amboniny. Private fitaterana izao lasa fanampiny zavatra maro mahafinaritra sy ny fampidirana ny tena ny mampifandanja ny môtô/ hoverboards . Fantaro-ahoana no sakaizan'ny olombelona indrindra fa ny fanatsarana ny fomba fiainana sy manome safidy bebe kokoa mba hahita ny marika lafiny vaovao izao tontolo izao amin'ny dingana tsirairay.
Tany an- Self ny mampifandanja ny Scooters Overview Internet, dia efa natao naneho ny heviny momba ireo mpivarotra izay mety ho azo ianteherana sy manolotra zana-kazo tsara kalitao. Ny voaaro lamaody amin'izao fotoana izao dia ho avy indray hita ao amin'ny an-tsena. Fanovana ho amin'ny ankavia, na mety koa izy hampody, na manilika indray hanova. Scooters tahìny namidy ho fananana manokana ho an'ny olona ny fampiasana ny ankizy. Na izany aza, dia ny heviny manokana, safidy sasany mety hanampy ny olona iray ny tsi fa tsy izy rehetra. Any ambany noho izany, ary nividy mitandrema - azonao atao koa ny mividy mora ny voasarimakirana. VAOVAO Update: Tandremo mividy cheaply nanao Koowheel knockoffs! Môtô sasany kosa miezaka mba ho azo antoka ny fiarovana ny manome anao ny kambana ny mampifandanja ny rafitra, dia mety ho tianao mba ho azo antoka ny fiarovana bebe kokoa aza. Raha tsapanao fa ny orinasa tsy ampy Vibe fa ankehitriny, dia mety hanova mora foana fa amin'ny mividy roa tena ny mampifandanja ny môtô. Azonao atao mihitsy aza amin'ny zorony hahafehy tena diso tafahoatra ny hafainganam-pandeha eo amin'ny hetsika anao ho ampianarina fotsiny amin'ny lafiny ilany.
Post fotoana: Nov-30-2017